सरकारको निर्णयले नेपाल बन्न सक्छ विदेशी मुभी-हब !
बिहीबार, जेठ ५ २०७९ ०५:११ PM
काठमाडौं । गएको एक महिना बलिउड चलचित्र उचाइको छायांकन नेपालमा भयो । भारतीय चर्चित कलाकारहरु सम्मिलित उचाइ टिम एक महिना नेपाल बस्दा उनीहरुले गरेको खर्च मात्र होइन, नेपालको पर्यटनको पनि प्रचार–प्रसारमा सघाउ पुग्यो ।
कोभिडबाट भर्खरमाथि उठेको पर्यटन क्षेत्रका लागि यो पहिलो सुखद् पल थियो । सुरज बडजात्याको निर्देशन रहेको ‘उचाइ’मा बलिउडबाट अनुपम खेर, परिणिती चोपडा, बोमन इरानी र सारिका हसनसहित करिब ३ सय जनाको टिम नेपाल आएका थिए । बलिउड कलाकारहरु नेपाल आएसँगै नेपालको विभिन्न स्थलहरुको फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए ।
मुख्य कलाकारमध्येका अनुपम खेर, परिणिती चोपडा र बोमन इरानीले दैनिकजसो काठमाडौं, खुम्बु र मनाङ क्षेत्रका तस्बिरहरु आफ्नो लाखौं फ्लोअर्स भएका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा नेपालको प्रचार–प्रसारमा सघाउ पुगेको थियो ।
उनीहरुले सेयर गरेको फोटो र भिडियोले विश्वभर रहेका करोडौं फ्यान फलोइङले नेपालको विषयमा नजिकबाट बुझ्ने मौकासमेत पाए । एक महिनासम्म नेपालसहित भारतीय मिडियाहरुले समेत उनीहरुले सेयर गरेका तस्बिरहरु र उनीहरुको गतिविधिलाई प्रकाशन र प्रशारण गरे । जसको कारण नेपालको विश्वभर निःशुल्क प्रचार भयो ।
उचाइ फिल्मको छायांकन नेपालमा लुक्ला, नाम्चे हुँदै मनाङ पुगेर सकिएको हो । बिग बजेटमा निर्माण भइरहेको सो फिल्मले नेपाललाई रोज्नुले पनि नेपाल सिनेमा छायांकनका लागि प्राकृतिक सेट भन्ने पुष्टि गरेको छ । नेपाल बस्दा उचाइ टिमले १२ करोड खर्च गरेको नेपालको व्यवस्थापन हेरेको कम्पनी थ्री ह्विलर्सका सञ्चालक सुरज आचार्यले बताए ।
हुन त, यसअघि पनि नेपालमा विदेशी फिल्महरु छायांकन नभएको भने होइन । धेरै फिल्महरु नेपालमा छायांकन भएका छन् । तर, कोभिडले पर्यटन क्षेत्र थला परिरहेको बेला बलिउड फिल्म उचाइ नेपालमा आएर सुटिङ गर्नुले विश्व बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको पर्यटन व्यवसायी एवं अल्टिच्युड एयरका प्रबन्ध निर्देशक निमानुरु शेर्पा बताउँछन् ।
‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सिनेमा छायांकनको थलो हुन सक्छ, प्रवन्ध निर्देशक शेर्पाले भने, नेपालमा विदेशी सिनेमा छायांकनका लागि आउन सम्भव पनि छ, तर सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पहल र प्रचार गर्नुपर्छ ।’
म्यारियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले न्युजिल्याण्डको सिनेमा टुरिजमको मोडललाई नेपालले पनि आत्मासाथ गर्न सक्ने बताउँछन् । १९९५ तिर न्युजिल्याण्डमा पर्यटनको प्रचार गर्नका लागि ठूला भारतीय फिल्म निर्माताहरूलाई बोलाएर न्युजिल्याण्डमा फिल्म सुटिङ गर्ने प्रस्ताव राख्दै सुटिङ गर्नेलाई होटलमा छुट, आन्तरिक हवाई खर्चको जिम्मासमेत लिने अफर दिइएको बताउँदै अग्रवालले नेपालमा पनि फिल्म सुटिङका छुट र अफर दिएर बोलाउन सकिने बताए ।
‘न्युजिल्याण्डले होटलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेसँगै भिसा शुल्क छुटदेखि अरू करहरूसमेत छुट गराएपछि त्यो बेलामा १० वटाभन्दा बढी भारतीय फिल्मको सुटिङ भएको थियो, अग्रवालले भने, त्यसपछि त्यहाँ भारतीय पर्यटकहरूको ओइरो लागेको थियो ’। आफंैमा सुन्दर रहेको न्युजिल्याण्डलाई धेरै भारतीयहरूले मनपराएकै कारण लाखौंको संख्यामा त्यहाँ घुम्न गएका थिए । न्युजिल्याण्डले सिनेमा टुरिजमका रूपमा विस्तार गर्न सफल भयो ।
विदेशी फिल्म नेपालमा छायांकन हुनुले नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको कुरा विश्वभर फैलिएको पर्यटन व्यवसायीहरुको बुझाई छ । छायांकनको क्रममा लगभग ३ सयको हाराहारीमा हेलिकप्टर उडान गरिएको थियो । यो एक महिनाको दौरानमा हेलीको फ्लाइट ३ सयभन्दा बढी थियो । फाप्लो–लुक्ला, लुक्ला–नाम्चे, नाम्चे–एबीसी, कालापत्थर, कालापत्थर–काठमाडौं । फिल्मको छायांकनको क्रममा अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो ।
विदेशी सिनेमालाई भर्जिन लोकेसन वा विषय सान्दर्भिक लोकेसन आवश्यक भएर नेपाल छिर्न थालेपछि छायांकन थलोको रुपमा विकास र छायाकन सकिएपछि सिनेमा पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
‘बलिउड र हलिउडका फिल्म अर्बौं रकममा बनेका हुन्छन्, थ्री ह्विलर्सका सञ्चालक आचार्य भन्छन्, उनीहरू ५ र १० दिनको फिल्म छायांकन गर्न नेपाल आइदिए मात्र पनि पुग्छ ।’ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको प्रचारमा चासो नदेखाइदिँदा नेपालका कति छायांकन स्थलहरू विदेशी फिल्मकर्मीलाई देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सिनेमा पछ्याएर आउने पर्यटक अझै बढ्ने छन् । भारतीयहरुको गन्तव्य सूचीमा रहने मुस्ताङमा अभिताभको फिल्म खुदागवाह २२ वर्षअघि सुटिङ भएको थियो । खुदागवाह हेरेर याद गर्ने भारतीयहरु मुस्ताङ पुग्ने चाह अझै पनि गर्छन् ।
खुदागवाह, क्याराभान, अप इन द विन्ड र एभरेष्ट मात्र होइन नेपालमा सुटिङ हुने विदेशी सिनेमा बढ्दै गएका छन् । हलिउडको लिटिल बुद्ध, द गोल्डेन चाइल्ड, द वाइन्ड हर्स, रेड कर्नरलगायत सिनेमाले नेपालको लोकेसनलाई उतारेका छन् । त्यस्तै भारतीय सिनेमा हरे राम हरे कृष्ण, युद्ध, घरवाली वाहरवाली, महान, लव इन नेपाल, एक हसिना एक दिवाना, बेकाबुलगायत पनि छायांकन भइसकेका छन् । त्यस्तै हङकङको सिनेमा बोधी ड्रामा, क्यू वा, फ्रान्सको फियोर डेले मिली इ यूना नोट्टे, द कन्क्यसुष्ट अफ एभरेष्टलगायत सिनेमाले पनि नेपाल उतारिसकेका छन् । त्यस्तै स्पाइनिस सिनेमा काठमाडौं मिरर इन द स्काईले पनि नेपालको सुन्दरतालाई सुन्दर ढंगले सिनेमामा उतारेको छ ।
नेपाल आउने पर्यटक डोल्पा र मुस्ताङ पुग्ने चाहना राख्छन् । सिनेमा पछ्याएर सुटिङ भएको ठाउँमा पुग्ने पर्यटकको बसाई लम्बाउने योजना पर्यटन व्यवसायी र राज्यको हुनुपर्छ ।
सिनेमाको कथा र विषय वस्तु जे भए पनि नेपालमा छायांकन भएका विदेशी सिनेमाले नेपालका प्राकृतिक सुन्दरतालाई दृश्यको भाषामा देखाएका छन् । नेपालको पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने विदेशमा महँगो खर्च गर्नुपर्ने कतिपय बाध्यतालाई विदेशी सिनेमाले सित्तैमा प्रबद्र्धन गरिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा आगामी दिन अझै थुप्रै सिनेमा छायांकनका लागि आउने सम्भावना छ, विदेशी सिनेमा नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने मेगा एडभेन्चर इन्टरनेसनल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक गणेश शर्माले बताए । एउटा पर्यटक नेपाल आएर फर्किनु र एउटा फिल्म छायांकन भएर रिलिज हुनुमा आकाशजमिनको फरक हुने उनले बताए । ‘फिल्म भनेको देशका लागि फ्रि मार्केटिङ हो, त्यहाँ देखिएका दृश्यहमा लोभिएर घुम्न आउनेहरु धेरै छन्, शर्माले भने, नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने प्रचार–प्रसारभन्दा एउटा फिल्मको छायांकनले कैयौं गुणा प्रभावकारी हुन्छ’ ।
यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले उचित मागहरु सम्बोद्धन नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउनका लागि केही झन्झटहरु छन् । त्यसलाई समाधान गरेर सहजीकरण गरिदिने हो भने धेरै विदेशी फिल्महरु नेपालमा छायांकन हुने थियो ।
विदेशी फिल्म सुटिङका लागि अनुमति लिन सहज भए पनि ड्रोन प्रयोगका लागि अनुमति लिन भने धेरै झन्झटिलो बनाएको छ । ड्रोन प्रयोगका रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले अनावश्यक रुपमा सम्पर्क अधिकारी(लियाजन अफिसर)हरु पठाउने गरेको छ । जुन खर्चिलो र झन्झटिलो हो । फिल्म खिच्नका लागि दुई चार जना मात्र आए पनि सम्पर्क अधिकारीहरु पठाउने गरिएको छ । त्यसलाई एकद्वार प्रणाली गरेर सञ्चार मन्त्रालयबाट मात्र लियाजन अफिसर पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नियमावलीमा लियोजन अफिसरहरु पठाउने व्यवस्था नभए पनि मन्त्रालयहरुले आपूmखुसी कर्मचारीहरु पठाएर आर्थिक भार थप्ने गरेको विदेशीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । योसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सुटिङ गर्नका लागि पनि धेरै समस्याहरु छन् । त्यहाँका लागि अनुमति लिनेदेखि ड्रोन प्रयोग गर्नका लागि समस्या रहेकाले सरकारले ठूला लगानीका फिल्महरुलाई सहजीकरण गरिदिए धेरै राहत मिल्न सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अहिले विदेशका अधिकांश मुलुकमा कोभिडका कारण पूर्णरुपमा खुला नभइरहेको बेलामा नेपालले विदेशी फिल्म छायांकनलाई सहजीकरण गरिदिएर मौकाको फाइदा लिन सक्ने प्रवन्ध निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
वाइल्डलाइफको छायांकनका लागि यहाँ धेरै नै समस्या छ । जसको कारण यहाँको बाँकी भाग सुटिङका लागि अफ्रिकासमेत जाने गरेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक लियोजन अफिसरहरु खटाएर क्लोजक्याम्पमा सुटिङ गर्ने वातावरण सरकारले बनाउने हो भने अझै नेपालप्रति आकर्षण बढ्नेछ ।
सगरमाथा क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोगमा पनि अंकुश लगाएको छ । हिलेसम्म नेपालमा फिल्म सुटिङ गर्नका लागि आउन पहल निजी क्षेत्रले मात्र गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले पनि अपनत्व लिएर कार्यविधि नै बनाउन सकियो भने कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रले तत्कालै राहतको महसुस गर्न पाउने बताउँछन् ।
बोर्डले बीबीसी र नेसनल जोग्राफिमा करोडौं खर्च गरेर विज्ञापन दिनुभन्दा फिल्म छायांकन गर्न आउनेहरुलाई सहजीकरण गरिदियो भने त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छन् । पछिल्लो समय ठूला ब्यानरका फिल्महरु पनि आउन थालेका छन् । जुन सकारात्मक विषय हो । योसँगै सुटिङका लागि आवश्यक इकुमेन्ट ल्याउनका लागि पनि भन्सार छुटका विषयहरुमा सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
पर्यटन बोर्डका निर्देशक लक्ष्मण गौतमले विदेशी फिल्मलाई नेपालमा सुटिङ गर्न आउने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए । ‘फिल्म सुटिङका लागि विभिन्न ठाउँबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै वानडोर प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ आवश्यक पहल गरिरहेका छौं, निर्देशक गौतमले भने ।
विदेशी फिल्म सुटिङका लागि अनावश्यक रुपमा लियोजन अफिसरहरु खटाएर दुःख दिनेदेखि वन, गृह, सञ्चार मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने अनुमतिलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको र सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
विदेशी फिल्मलाई सहज रुपमा सुटिङ गर्न दिने व्यवस्थाका लागि तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रिपोटसमेत बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ । त्यो बेला वन, राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले असन्तुष्ट जनाएको थियो । विभिन्न मुलुकले विदेशी फिल्महरु छायांकनका लागि धेरै छुट दिने गरेको छ ।
सोमबार २० मंसिर २०७८ ०६:५२ AM मा प्रकाशित
पर्यटन क्षेत्र रिबाउन्स हुँदै, डलर सञ्चिति अभाव हटाउन हुन सक्छ ‘अचुक’
कर्मचारी रिझाएर अध्यक्ष बनेका युवराजको कार्यकक्षमा ताला लगाउने अवस्था किन आयो ?
फाइभ स्टार होटलको झल्को दिने पोखराको ‘फिस्टेल एकेडेमी’, १ अर्ब लगानी
कोभिडले सौराहका होटलमा ताला लाग्दा विकल्पमा जन्मिएको ‘सेभ सुपरमार्केट’
जापान जान सकस, ८० हजारमा पाइने टिकट १ लाख ३२ हजार पुग्यो
जीवन बिमामा तीव्र प्रतिस्पर्धाको असरः व्यापारिक औजार बनाउँदै फराकिलो बोनस दर
हिमाली जिल्लामा ‘माउन्टेन लज अफ नेपाल’ लाई चेन होटलमा फैलाउँदै यती ग्रुप
थलिएको पर्यटन तंग्रिने बेला मन्त्रीको ‘स्टन्ट’ ले पारेको आहत
मन्त्री आलेको दोहोरो चरित्र,कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णयकर्तालाई हटाएर सिफारिसकर्तालाई भित्र्याए
६ युवाको कम्बाइनले जन्मिएको ‘पेपे पिजा’, जसले भाटभटेनी ढाक्दै छ
गणतन्त्र दिवस ३ दिन मनाउने निर्णय, हरेक दिन साँझ दिपावली
मुक्तिनाथ विकास बैंककाे खातामा पैसा नभएकाे चेक काट्ने प्रकाश रेग्मी पक्राउ